ला, नेपालमा त संविधान नै छैन भनेर टेन्सन हुन्छः एसएलसी टपर संजोग कार्की - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / कुराकानी / ला, नेपालमा त संविधान नै छैन भनेर टेन्सन हुन्छः एसएलसी टपर संजोग कार्की
ला, नेपालमा त संविधान नै छैन भनेर टेन्सन हुन्छः एसएलसी टपर संजोग कार्की
रिलयान्स इन्टर नेसनल एकाडेमीका विद्यार्थी संजोग कार्की २०७० सालको एलएलसी परिक्षामा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थी बनेका छन् । उनीसँगै दृष्टि गिरी पनि समान ९४.१२ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । भविश्यमा एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन्ने रहर राख्ने कार्कीलाई यतिबेला बधाईको ओइरो लागको छ । कार्कीसँग सफलताको रहस्य र अन्य समसामायिक विषयमा गरीयको कुराकानी । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादीत अंशः
एसएलसीमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनुभयो । यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
यसको श्रेय म मेरा गुरुबा, गुरुआमा तथा आमा–बुवालाई दिन चाहन्छु । वहाँहरुकै प्रेरणाले गर्दा आज मैले यो सफलता प्राप्त गर्न सके । यसमा मरो मिहिनेत पनि छ, तैपनि वहाँहरुको प्रेरणा र हौसलाले मलाई यो बाटोमा हिँड्न मद्दत गरेको हो ।
अहिले प्राप्त गर्नुभएको नतिजाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट नै छु । तैपनि योभन्दा पनि धेरै ल्याउँछु भन्ने सोचेको थिएँ । खै के भयो, आफूले सोचे जति चाँही ल्याउन सकिन ।
एउटा विद्यार्थीलाई सफल बनाउन के–के कुराले प्रभाव पार्छ ?
विद्यार्थी सफल वा असफल हुने भन्ने कुरा आमाको कोखबाटै नै निर्धारण हुने कुरा होइन । मेरो बारेमा भन्दा म अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक छैन । उनीहरुभन्दा फरक त्यति धेरै केही पनि गर्दैन । उनीहरु जति पढ्छन्, म पनि त्यति नै पढ्छु । फरक यति मात्र हो, म जति पढ्छु, त्यो बुझेर पढ्छु ।
जहिले पनि पढ्दा मैले अंकको लागि भन्दा पनि ज्ञानको लागि पढें । एउटा कागजले मात्र मानिसको पूरा जीवन निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यही भएर घोकेर पढ्नुभन्दा पनि बुझेर पढ्यो भने विद्यार्थी सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
कति घण्टा पढ्नु हुन्थ्यो ?
स्कूलभन्दा बाहेक म त्यही ४–५ घण्टा पढ्थे । कक्षा दशको सुरुवातदेखि नै यही अनुपातमा पढें । कहिले कम वा धेरै पढिँन । एउटा तालिका बनाएको थिएँ पढ्न, त्यही अनुसार पढ्थे ।
अब के बन्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ?
यसमा एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु । हामी पाँच जना साथीहरु थियौं, म, सुजन नेपाल, विज्ञ आचार्य, केशव चालिसे र प्रताप श्रेष्ठ । हामी यहाँ सानै देखि सँगै पढ्थ्यौं । त्यतिबेलामा हामी मान्छे चन्द्रमा गएको भन्ने बारे पढ्थ्यौं । त्यति बेला हामीलाई हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच्यौं । हामीलाई पनि भुगोलविद् हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । यसबाट रकेट इन्जिनियरिङतर्फ जाने सोँच बनायौं । अब हामी यही अनुसारले पढ्नुपर्छ भनेर प्रण पनि ग¥यौं । त्यति बेला हामी सायद कक्षा १ मा पढ्थ्यौं होला । तर विस्तारै हामी साथीहरु छुटिदै गयौं, कतिले त्यो सपना पनि बिर्से ।
अरु साथीहरु मध्ये विज्ञ आचार्य नेपाली राजदूतका छोरा थिए । ऊ आफ्नो बाबासँगै विदेश गयो । तर, अहिले ऊ नेपाल आएको छ । अरु साथीहरु मध्ये ऊ अहिले पनि नासामा काम गर्छु भन्दै छ । त्यसपछि केशव चालिसे पनि यही नै गर्छु भन्दैछ । म पनि त्यही सपनामा नै अडिग छु, म नासामा नै काम गर्न चाहन्छु । पाँच जनामध्ये हामी तीन जना अझै हाम्रो सपनामा अडेका छौं । हेरौं कहाँसम्म लान्छ यो सपनाले ।
तपाईंले त यत्रो अंक ल्याउनुभयो तर अहिले एसएलसी दिने लगभग आधा विद्यार्थीहरु फेल भएका छन् । तपाईंको विचारमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ ?
नेपालमा व्यावहारिक शिक्षा नै छैन । विद्यार्थीहरुलाई साँचिक्कै ज्ञान दिने भन्दा पनि किताबमा लेखेको मात्र जबरजस्ती कोच्ने रहेका छौं । अझ, शिक्षामा राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई अझ धरायसी बनाइरहेको छै । यसले विद्यार्थीको मानसिकतामा एक प्रकारको त्रास फैलाउँछ । अब यस्ता कृयाकलापहरु बन्द गरेर अविलम्ब शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने बन्द, हड्ताल आदि बाट विद्यालयलाई मुक्त राख्नुपर्छ । ‘नेपाल बन्द छ भन्दा पनि नेपाल बन्दै छ’ भन्ने नारालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ हाम्रो शिक्षा नीतिमा ?
पूरै शिक्षा नीति बदल्नुपर्ने देख्छु । निजी र सरकारी स्कूलहरुको नतिजामा अन्तर हेर्नुहोस् । निजी विद्यालयमा सबै सुविधाहरु छन् विद्यार्थीका लागि । तर, सरकारी विद्यालयमा एउटा दक्ष शिक्षक छान्ने सही प्रक्रिया पनि छैन । सबैतिर दक्ष शिक्षक र व्यावहारिक शिक्षा लागु गराउने नीतिको आवश्यकता छ ।
तपाईंको स्कूल रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीको पढाउने तरिका चाहीँ कस्तो छ ?
यहाँ त सकेसम्म सरहरुले व्यावहारिक रुपमा नै पढाउने प्रयास गर्नु भएको छ । हामीलाई अतिरिक्त कृयाकलापहरुमा पनि सहभागी गराउनुहुन्छ । यसले हामीले सँधै नयाँ कुरा सिक्न र जान्न मद्दत गरिराखेको थियो ।
नेपाल अहिले नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रियामा छ । के तपाईंहरुलाई पनि यसबारे चासो हुन्छ ?
संविधान नहुँदा सबैभन्दा मारमा हामी विद्यार्थीहरु परेका छौं । ला, नेपालमा त संविधाननै छैन भनेर टेन्सन पनि हुन्छ । संविधान बनाउन त्यत्रो रकम खर्च गरिसकेका छन् । पहिलो संविधानसभाको सबै पैसा खेर गयो । त्यो पैसा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको भए, कति राम्रो प्रतिफल आउँथ्यो । यसबाट बरु दक्ष सभासद् नै जन्मिन्थे । अहिलेका सभासद्हरुको शैक्षिक योग्यता हेर्नुहोस् । यस्ता कुराले पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई अझ पछि धकेली राखेको छ ।
के भन्छन् संजोगका प्रिन्सिपल सर ?
खेमलाल भुसाल रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ । संजोगको सफलतामा वहाँलाई पनि ठूलो श्रेय जान्छ । वहाँसँग संजोग र विद्यालयका बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ केही अंशः
तपाईंको स्कूलबाट विद्यार्थीले एसएलसीमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउन सफल भएका छन् । त्यस्तो के छ तपाईंको स्कूलमा जसले यस्तो नतिजा आउन सफल भयो ?
हामीले विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र भन्दा पनि विद्यार्थीले कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने विषमा बढी जोड दिन्छौं । घोकाउने त जहाँ पनि गर्छन्, तर हामी विद्यार्थीहरुलाई व्यावहारिक शिक्षा दिने प्रयास गर्छौं, अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा भाग लिन प्रेरित गर्छौं । त्यही नै अहिलेको सफलताको करक तत्व हो जस्तो लाग्छ ।
यस्तो नतिजा आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो ?
संजोगको विषयमा हामी आशावादी थियौं । ऊ यहाँ एलकेजी देखि पढेको हो । अहिलेसम्म ऊ सेकेण्ड भएको रेकर्ड नै छैन । पहिलो र दोस्रोबीच पनि धेरै अन्तर हुन्थ्यो । पढाई बाहेक अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि ऊ सँधै प्रथमनै हुन्थ्यो । ऊ बहुप्रतिभाशाली विद्यार्थी हो । हाम्रो विद्यालयका लागि यो पहिलो अवसर भए पनि यसबाट हामी आश्चर्य चकित भएका छैनौं । हामीले जे आशा गरेका थियौं, त्यही अनुसारको परिणाम पाएका छौं ।
अब संजोगले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
संजोगले जे लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा ऊ सफल होस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ । त्यसका लागि हामी स्कूल परिवारले जे जस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नका लागि हामी तयार छौं ।
संजोगले विद्यालयमा गरेको केही गल्ती याद छ तपाईंलाई ?
अहँ, उसले अहिलेसम्म त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन । ऊ हक्की स्वभावको थियो । अरुले केही ग¥यो भने पनि यहाँ आएर रिपोर्ट गथ्र्यो । बरु कसैबाट केही कमजोरी भयो भने खुलेरै हामीलाई सुनाउँथ्यो ।
एसएलसीको नतिजा खज्किँदै जानुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
यसमा कुनै व्यक्तिभन्दा पनि शिक्षा प्रणाली नै दोषी छ । यहाँ विद्यार्थीलाई मूल्यांकन गर्ने तरिका भएको छैन । केवल ३ घण्टा लेखेको भरमा विद्यार्थीको भविष्य जाँच्ने गरिन्छ, त्यो विल्कुलै गलत छ । आज संजोगले सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएको छ, तर कुनै दिन ऊ विरामी परेको भए, के उसको सही मूल्यांकन हुन्थ्यो ? अझ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधर, पढाउने तरिकादेखिले सबैमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।ratopati
मलाई दाेस्रो दर्जाको…
एसएलसी पासपछि ११ मा…
मिस नेपाल इभाना…
मेरी आमा : ट्युसन पढाएर…
Related Itemsdigital khabarEducationNationalNepalNewsSLCWorld
← Previous Story ‘प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर’ – अध्यक्ष झलनाथ खनाल
Next Story → गरिबको खेल हो फुटबल, त्यसैले लोकप्रिय छ